कोरोना, प्रकृति र पुँजिवाद : मोहन गोले – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
चैत्र २३, २०७६ ११:१० मा प्रकाशित
यतिबेला कोरोना भाइरसदेखि बिश्व मानव समुदाय डर र त्रासको बीचमा घरघरमा लुकिरहेको छ । हामी सबैलाई लागेको छ, कति दिन हामी घरभित्र लुकेर बस्नु पर्ने हो ? यसको अन्त्य कहिले होला ? कसैले भन्छन्, यो भाइरस अप्रिल महिनासम्म सक्रिय रहनेछ । त्यसपछि यो बिस्तारै कम हुँदै जान्छ । कोरोना भाइरस ३० डिग्रीभन्दा बढी गर्मीमा बाँच्न नसक्ने चिकत्सकीय तथ्यको कोणबाट यसखालको अनुमान हामी गरिरहेका छौ । तर मलाई यो त्यति सजिलै हराइहाल्छ भन्ने लाग्दैन । संसारमा कुनैपनि जीव अस्तित्वमा आउनुको पछाडि एउटा कारण हुन्छ । अकारण कुनै चिजको उत्पति र मृत्यु पनि हुँदैन ।